Teknolojia - Teknôlôjia, Darrell Long, IBM, Sid Meiers Civil
ⓘ Teknolojia - Teknôlôjia, Darrell Long, IBM, Sid Meiers Civilization, Haikoriam-boanaratra, Olika voafintina anaty, Solosaina, Citizendium, Nanôteknôlôjia ..
Ny teknôlôjia dia fanaovana, fanovàna, fampiasana ary fahalalanny fitaovana, milina, fahaizana, ary fomba firafetana, ho anny famahana olana, fanatsarana ny vahaolana na mahatakatra tanjona. Ny teknôlôjia dia manomboka aminny fampiasana ny zavatra hita ho fitaovana. Ny tanjonny zavatra namboarina vokatry ny teknôlôjia dia natao hanamora ny fiainanny olona. Ny fahafahanny olombelona mamehy ny afo izao ohatra dia nampitombo ny habetsaky ny sakafo azo hohanina ary ny fitana ny kodiarana no nanampy ny olombelona taminny fandehanana lavitra ary taminny fifehezana ny tontolo iainana. Ny fahitana ...
Darrell Long dia injeniera aminny solosaina, teraka taminny 5 Aogositra 1962. Mpampianatra manam-pahaizana malaza izy ary talenny sampana fikarohana momba ny firaketana an-tserasera. Ny tombotsoanny fikarohana ankehitriny eo aminny sehatry ny fitahirizana dia ahitana rafitra fitehirizana avo lenta, rafi-pitahiram-pivoarana ary rafitra fananganana angovo azo antoka. Ny fikarohana nataony dia ahitana ny fahombiazanny solosaina, ny fianarana milina fampiasa, ary ny fiarovana cyber. Ny tombotsoani Long dia ny fikarakarana angona angona, ny rafitra miasa, ny fizarana fizarana, ary ny fiarovana ...
Ny Raharaha Iraisam-pirenena Milina Corporation dia mihazona orinasa voatanisa ao aminny the New York tsenam-pifanakalozan-tsanda. IBM naorina ao aminny fanjakani New York ao 1911. Taminny voalohany, ny orinasa dia antsoina hoe Computing Tabulating Fandraketana ny Orinasa, fa taminny 1924 no anarana IBM. Ny vokatra dia nahitana ny avy aminny mizana sy ny fitaovana hatry ny indostria mampiasa mandra-computing milina sy ny totohondriny karatra. Aminizao fotoana izao dia iraisam-pirenena orinasa ny solosaina teknolojia manana ny foibeny any Armonk ao aminny fanjakani New York. Ny orinasa dia ...
Civilization dia kilalao videô nataoni Sid Meier, dia voanontani Microprose. DOS ny interface-ny taminny taona 1991. Ilay mpilalao mitondra sivilizasiona iray ; tsy maintsy entiny avy eo aminny taona ny vato hatrany aminny fizahana ny habaka. Avy aminilay rohitra ny kilalao videô Civilization io kilalao io.
Ny haikoriam-boanaratra dia anisanny sampananny siansa, ny injenieria ary ny teknolojia izay mikasika ny olikaratra mampiasa mpiorina arakaratra toy ny tioba termoionika, tirazisitôro, diôda ary olikaratra aharo, izay ampiarahana aminny ireo mpiorina fampitohizana mihinanaratra. Ny fihetsika tsy mizotra ny mpiorina ary ny fahafahany mifehy ny fihetsiky ny voanaratra ao aminny olikaratra dia mahafaka ny fampitomboana ara-kerinaratry ny herinaratra izay mitondra fampahalalana.
Ny olika voafintina anaty dia olikaratra nafintina mba hitana anaty velarana kely. Ny mpampita aratra ikorianny rio anatinio olikaratra io dia mpampita tapany, izay vita silisiôma. Ankehitriny dia feno olika voafintina anaty ny fitaovana haikoriam-boanaratra ary anisanny nampivoatra be ny haikoriam-boanaratra ny fampiasana ireo olika voafintina ireo. Manomboka aminny finday ampiasaina hatrany aminny fitaovana fanaovana raharaha an-trano dia misy olika voafintina anaty. Mety ahitana tirazisitôro hatrany aminny iray miliara ny OVA izay manana velarana latsaky ny iray santimetatra toradroa. A ...
Ny solosaina na kompiotera na ordinatera dia milina elektrônika mandeha aminny famakiana tsirairay ny vondrombaiko mampanao azy tao ara-lojika ary aritmetika eo amina isa roa fototra. Ny fampahalalana havadibadika dia azo na aminny famakiana ny tadidy, na aminny famakiana ireo mpanorina ivelany device mamadika ireo fampahalalana isan-karazany ho isa roa fototra. Rehefa ampiasaina na rehefa voavadibadika, averina soratana ireo fampahalalana ireo, na ao aminny tadidy na ao amina mpanorina manokana mamadika fampahalalana voasoratra aminny isa roa fototra ho tao fanehoana eo aminny efajoro na ...
Citizendium dia raki-pahalalana malalaka eo aminny aterineto izay mampiasa ny teknolojia Wiki. I Larry Sanger no namorona azy io, izay anisanny mpamorona ani Wikipedia ihany koa taminny taona 2001.
Ny nanôteknôlôjia dia ampahany aminny siansa sy ny teknolojia momba ny fanaraha-maso ny voanjavatra manana ny habenny atoma sy ny molekiola - izany dia midika zavatratokony ho 100 nanometers na latsakizany. Ny nanoteknolojia dia ahitana ny fanaovana vokatra izay mampiasa faritra kely sahala izany ny nanoteknolojia, toy ny fitaovana elektronika, katalista, ary mpitsapa, sns. Ny Nanoteknolojia dia faritana ho toy ny fianarana ny rafitra manana habe eo aminny 1 hatraminny 100 nanometatra.
Kilalao videô nataoni Sid Meier ny Civilization III. Misy version roa nanarakanilay kilalao Civilization III: Play The World sy Civilization III: Conquests ; ireo version ireo afaka ilalaovana ambonny internet ary manampy règle de jeu.
Ny finday dia fitaovana fifandraisana aminny alalanny telefaonina tsy misy tariby. Ny finday dia noforonina taminny taona 1990 ary nanomboka niparitaka erakizao tontolo izao nanomboka ny taona roa arivo. Noho ny fivoaranny teknolojia ary ny fihakelezanny olikaratra ampiasainny finday, dia ahafahana manao zavatra izay natokana ho anny solosaina ireo finday izay antsoina hoe "smartphone".
Ny drôna na drônina dia karazana fiaramanidina afaka mandeha irery tsy misy mpanamory, izany hoe baikona aminny fitaovana fibaikon-davitra. Ny drône dia fitaovana arifomba manaraka tekinôlôjia ary ny tafika no tena mampiasa azy.